I-Plants vs Zombies™ 2 Free APK inguqulo yakamuva ye-9 Ansoli - khulula imidlalo abayitoho ye-android
Dlala i-win-win hit action-Isu adventure lapho uhlangana khona, ubingelele, futhi unqobe amabutho ama-Zombies angama-hilarious kusukela ekuqaleni kwesikhathi, kuze kube sekupheleni kwezinsuku. Hlanganisa ibutho lezitshalo ezimangalisayo, uzenze zikhulu ngePlant Food, futhi wakhe uhlelo oluphambili lokuvikela ubuchopho bakho.
FUNDA IMINININGWANE YEMIPHAKATHI NAMAZIMBULA
Qoqa izinganekwane zakho ezithandwayo zotshani, njenge-sunflower nePeashooter, kanye namakhulu amanye ama-hotshots wesiko, kufaka nokuqhakaza kokuqhakaza okunjengeLava Guava neLaser Bean. Iya kuzwane-kuye-ukushoda-uzwane ngezixhaxha eziningi zama-Zombies ngaso sonke isikhathi, njengeJetpack Zombie neMermaid Imp - kuzofanele uvikele ubuchopho bakho ekuqhakazeni iZinkukhu zeZombi!
KHULA IZINHLELO ZAMANDLA
Thola amaphakethe eMbewu njengoba udlala futhi uwasebenzise ukufudumeza izitshalo zakho ezinamandla. Amandla okuhlasela, ukuvikela okuphansi, ukusheshisa isikhathi sokutshala, futhi nokuthola amakhono amasha ngokuphelele. Khulisa izitshalo zakho ukuze uqinisekise ukuthi lezo Zombies zisenzelwa utshani!
HLANGANANI NABANYE EARENA
Cabanga isu lakho le-zombie-bashing elihamba phambili? Hlola amakhono akho okutshala lapho ubhekana nabanye abadlali e-Arena. Faka i-Arena futhi uqhudelane nabanye abadlali ukuthola amaphuzu aphezulu ngamazinga ahlukile. Thola izinhlamvu zemali, piñatas, nokuningi ukufaka amabhodi wabaphambili, ukukhuphuka ku-Le League, futhi ube ngumgcini wokugcina wegadi.
KAKHULU NGESIKHATHI NESIKHATHI
Yilwa ngaphesheya kwezilwandle ezi-11 ezihlanya, kusuka eGibhithe Lasendulo kuya Kude Ekude, nangale. Ngamazinga angaphezu kwama-300, izindawo ezingapheli eziyinselele engapheli, imidlalo emi-mini emnandi, nemicimbi yansuku zonke yePiñata Party, kuhlala kunenselelo entsha okufanele uyiqede. Futhi, lungisa izivikelo zakho ezinhle - UDkt Zomboss ulinde ukukuthatha ekugcineni komhlaba wonke!
Kudinga ukwamukelwa Kwenqubomgomo Yobumfihlo ne-Cookie Yesivumelwano Somsebenzisi.
Intengo: $0.0 Free
Inguqulo Yamanje: 7.6.1
Abasebenzisi Bokulinganisa: 6,168,449
Izimfuneko: Android 4.1+
Isilinganiso Sokuqukethwe: Everyone 10+
Igama Lephakheji: com.ea.game.pvz2_row